Iindaba-Ukuphucula i-Fuel Line ukuya kwi-Ptfe | IBESTEFLON
Ngokweentlobo ezahlukeneyo zokuqhekeza izithuthi, inokwahlulahlulwa ibe yipayipi yokuqhekeza i-hydraulic, umbhobho womoya owaphukileyo kunye nephepha lokuqhekeza. Ngokwemathiriyeli yayo, yahlulwe yaba ngumbhobho we-brake we-brake, umbhobho we-nylon waqhekeza kunye ne-PTFE brake hose
Irabha waqhekeza umbhobho unezibonelelo zamandla aqine kunye nofakelo olulula, kodwa into engalunganga kukuba umphezulu kulula ukuguga emva kokusetyenziswa kwexesha elide
Kwimeko yeqondo lobushushu elisezantsi, amandla ombane wenayiloni ayaphula umbhobho uya kuba buthathaka, ukuba uchaphazeleka yimikhosi yangaphandle, kulula ukuyaphula
Kodwa umbhobho we-PTFE unokumelana neqondo lobushushu eliphezulu, iqondo lobushushu eliphantsi, uxinzelelo oluphezulu, ukunxiba ukumelana, umhlwa kunye nezinye izinto, ubomi benkonzo ende, awudingi kutshintshwa rhoqo. Unokuhlawula ukusilela kwezinye izinto ezimbini
Ukhuseleko, ukuhlala ixesha elide kunye nokusebenza kufuneka kube zezona zinto ziphambili ngokubaluleka. I-E85 okanye i-ethanol ibonakalise ukuba ingumbane oqoqosho nonobuchule onokubonelela ngenombolo ye-octane efunekayo kunye namandla anokubakho kwizicelo ezifunwayo. Kodwa izongezo kwizibaseli zale mihla zinokuqina kwaye zihlazise uninzi lwezixhobo. Oku kungakhokelela ekuvuzeni okuyingozi kwaye kungashiya ivumba elibi. Nje ukuba umgca wombane wehle, amasuntswana ethumbu angangcolisi kwaye avale inaliti yezibaso kunye neendlela zecarburetor, ezichaphazela ukusebenza kunye nokubangela iingxaki
Esona sisombululo sisisombululo se-polytetrafluoroethylene (PTFE). I-PTFE sisixhobo seplastiki esisesona sinamandla kunazo zonke umbhobho wepetroli. Idibanisa ibakala lokuqaqamba elingaphezulu kwe-304 yentsimbi engenasici eboshwe ngetyhubhu yangaphakathi ye-PTFE yokunyusa ukuhamba, kwaye ulwakhiwo lwangaphandle oluntsonkothileyo lubonelela ngokuguquguquka okumangalisayo. Umbhobho wangaphakathi we-PTFE ukulungele ukusetyenziswa ngawo nawuphi na umbane kwaye unokumelana namaqondo obushushu ukuya kuthi ga kuma-260 degrees Celsius. Izinto eziphathekayo azichaphazeleki kukuwohloka kwamafutha, ngenxa yoko umphunga wamafutha awuphumi
Iingcebiso ngokubanzi malunga neenkqubo zombane:
Xa ufaka ifayile ye- Umbhobho wePTFE kwizithuthi, gcina ithumbu lamafutha kude nemithombo yobushushu, imiphetho ebukhali kunye neendawo ezihambayo. Ngalo lonke ixesha vumela ukucoca okwaneleyo kokuhamba kwenkqubo yamandla. Jonga ukucoceka phakathi kokumiswa kunye nenkqubo yokuhambisa. Qiniseka ukuba ujonga izinto zokumiswa kuyo yonke inkqubo ukunqanda ukucudisa okanye ukwandisa iithumbu zepetroli. Amathumbu eepetroli anokuchaphazeleka kukungcola kwendlela kunye namaqondo obushushu aphezulu, sebenzisa i-PTFE imibhobho yokubasa eboshwe ngentsimbi engenacingo okanye ucingo olunzima. Qiniseka ukuba uqinisa umbhobho ngokuqinileyo ukuthintela ukubola. IJig ikwanceda ukunciphisa ukungcangcazela kwamanye amacandelo. Sebenzisa izixhobo ezifanelekileyo zokwahlula xa umbhobho ngeepaneli
I-PTFE igcwele umbhobho
Ixesha Post: Sep-17-2021
ptfe yaluka ithumbu, Idibene nePtfe Hose - 939 / 939b, I-6an Ptfe Hose Assembly, umbhobho weptfe, ptfe wawutyabeka ithumbu, Indibano yethumbu le PTFE,